प्रधानमन्त्री ओलीको ‘नो स्ट्रिट पिपुल’ सपना पूरा होला ? – HostKhabar ::
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘नो स्ट्रिट पिपुल’ सपना पूरा होला ?
२४ मंसिरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकमा माग्न बसेको भेटिए कारबाही गर्ने सूचना जारी ग-यो । २८ र २९ मंसिरमा आफ्नो स्थापनाको २५ औं वर्षगाँठ मनाउने तयारीमा जुटेको महानगरले सडकमा माग्न बस्नेलाई ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने घोषणा गर्यो ।
महानगरले तीन दिनभित्र सडकपेटीमा माग्न बसेकालाई उठ्न उर्दीसमेत जारी गरेको छ । ‘भोकै कोही पर्दैनन्, भोकले कोही मर्दैनन्’ भन्ने नारा सहित स्थापना दिवस मनाउने तयारीमा लागेको महानगरले काठमाडौं महानगरलाई सडक मानवमुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको जनाएको छ ।
महानगरले यो नारा संघीय सरकारको २०७५०७६ को बजेटबाट लिएको हो । देशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने घोषणा २०७५०७६ को बजेटमै गरिएको थियो । बजेटमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नै उल्लेख थियो । तर, यो कार्यान्वयन भने भएन ।
झट्ट हेर्दा महानगरले सडक मानवमुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको देखिए पनि सडक मानवमुक्त बनाउने सपना र अभियान भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । उनले १३ असोज २०७६ मै स्थानीय तहलाई सडक मानवमुक्त बनाउन निर्देशन नै दिइसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भरतपुर महानगरपालिकाले ९ कात्तिकमा भरतपुरलाई सडक मानवमुक्त महानगर घोषणा ग-यो । तर, त्यस अगाडि गोरखा नगरपालिकाले आफूलाई सडक मानवमुक्त नगरपालिका घोषणा गरिसकेको थियो ।
ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि बारम्बार दोहो-याएको विषयमध्ये एक हो यो ‘नो स्ट्रिट पिपुल’ । असार २०७५ राजधानीको -याडिसन होटलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘अब हामी देशको एक जना नागरिक भोको छ छैन, एक जना पनि नागरिक खान नपाएर त बसेको छैन कि भनेर पनि हेर्छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ‘हर एक नागरिकले सबै सेवा र सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन । नेपाली भिखमंगा हुन सक्दैन । खान लाउन नपाउने नेपाली हुन सक्दैन ।’
१५ वैशाख ०७६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा मानव देखे फोन गर्न आग्रह पनि गरे । १३ असोज ०७६ मा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब छिट्टै सडक मानवमुक्त, भिखारीमुक्त देश घोषणा गर्नेछौं ।’
नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रममा उनले उद्घोष गरेका थिए । ४ कात्तिक ०७६ मा प्रधानमन्त्रीले फेरि उद्घोष गरे, ‘अब सडकमा कोही सुतेको, जिंग्रिङ्ग भएर बसेको देख्नुपर्दैन । सडकमा मान्छे हुनै सक्दैन । हरेकको व्यवस्था गरिन्छ । आवास दिइन्छ । अब नो स्ट्रिट पिपुल ।’
०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको कुरा पढ्दै राष्ट्रपति विद्यादवी भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘मेरो सरकारले असहाय, बेवारिसे, सङ्क्रमित र आश्रयहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण र हेरचाह गर्नेछ, सक्षम नागरिक बनाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेछ ।’
नीति तथा कार्यक्रमपछि आएको बजेटमा पनि सरकारले सडक मानवको पुनःस्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।
‘बेसहारा, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अभिभावकको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी परिवारका सदस्य सडकमा छाडी बेवारिसे बनाउने अभिभावक तथा संरक्षकबाटै आवश्यक संरक्षण दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ ०७६७७ को बजेटमा लेखिएको छ ।
स्थानीय र संघीय सरकारले सडक मानवमुक्त बनाउने अभियान आफ्नै बलबुतामा भने सुरु गरेका हैनन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मानेर यो अभियानमा स्थानीय सरकार सक्रिय देखिए पनि उनीहरुसँग यससम्बन्धी प्रस्ट योजना छैन ।
आफूसँग योजना नभएकै कारण स्थानीय सरकारले यो अभियान गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा लगाएको छ । भरतपुर महानगर र गोरखा नगरपालिकाले मानव सेवा आश्रमको सहयोगमा मानवमुक्त सडक घोषणा गरे । यस्तो घोषणा गर्ने पहिलो जिल्ला मकवानपुर हो ।
मकवानपुरले पनि आश्रमको सहयोगमा सडक मानवमुक्त जिल्ला घोषणा गरेको हो । आश्रमको मुख्यालय हेटौंडामा हुनले पनि यो सम्भव भएको हो । त्यस्तै पोखरा, ललितपुर महानगर पनि मानव सेवा आश्रमसँग मिलेरै यो अभियानमा लागि परेका छन् ।
सरकार भन्दा अगाडि अदालत
धानमन्त्री ओलीले देशलाई भिखारीमुक्त बनाउँछु भनिरहँदा सर्वोच्च अदालतले सडक मानवको व्यवस्थापन गर्न भन्दै ०७३ मै सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेको थियो ।
२६ जेठ ०७३ मा सर्वोच्चले, ‘जीवन नै संकटमा परेका, असक्त, परित्याक्त तथा घरबारविहीन बेवारिसे मानवको संरक्षणको लागि उचित बासस्थान र भरणपोषणको व्यवस्था गर्नू’ भनी सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालत मात्र होइन, नेपालको संविधानको मौलिक हकमा, ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ’ भनी लेखिएको छ । संविधान जारी भएको ४ वर्ष पुग्यो ।
सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको ३ वर्ष पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले भिखारी र सडक मानवमुक्त देश बनाउने भन्दै बारम्बार उद्घोष गरिरहेका छन् । तर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भने यो अभियान सहज देख्दैन ।
गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले यो अभियान प्रभाकारी नहुेन बताउँछन् मन्त्रालयका प्रवत्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल । देशभरमा घरबारविहीन नागरिक कति छन् भन्ने तथ्यांक नै सरकारी निकायसँग छैन ।
आश्रमको भरमा महानगर !
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालले सडक मानव मुक्त अभियानका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख गर्दै मानव सेवा आश्रमसँग मिलेर काम गर्ने बताइन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सडकमा बसिरहेका मान्छेको तथ्यांक लिने काम भइरहेको बताए । ‘हामी काठमाडौं महानगरलाई छिट्टै सडक मानवमुक्त घोषणा गर्छौं,’ उनले भने, ‘सडक मानवलाई राख्न हामीले घर बहालमा लिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छौं ।’
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले सडक बालबालिकालाई उद्धार गरिरहेको बताए । ‘०७३ यता काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै हामीले १२ सय भन्दा बढी बालबालिका उद्धार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘गैरसरकारी संस्थासंग मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले सजिलो भने छैन ।
सडक मानवमुक्त बनाउने भन्ने योजना त छ, तर यो योजना स्थानीय निकायसँग बढी केन्द्रित छ ।’ मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष गोविन्द टण्डनले वि ।सं २०८२ सम्म नेपाललाई नै सडक मानव मुक्त बनाउने अभियानमा रहेकाे बताए ।
‘हामीले मकवानपुर जिल्ला, भरतपुर महानगर, गोरखा नगरपालिकालाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरिसकेका छौँ, ‘ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँग मिलेर यो काम गरिरहेका छौँ । गण्डकी प्रदेशले पनि हामीलाई १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।’
सडक मानवमुक्त गर्न संघीय सरकारले २ करोडको अक्षयकोष स्थापना गरेको र त्यसमा आधा रकम आइसकेको उनले बताए । यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले आश्रममा बसेकाहरुलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै साे निर्णय छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेकाे बताए । नयाँ पत्रीका
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा मतदान सुरु
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश समितिको लागि आज चुनाव हुँदै
कर्णाली प्रदेश कार्य समितिमा रेणु आचार्य निर्विरोध सदस्यमा निर्वाचित
काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन,कर्णालीमा त्रिपक्षिय भिडन्त : देउवा, निधि र पौडल पक्षबाट सभापतिमा उम्मेद्वारी दर्ता
माओवादीले विधान परिमार्जनका लागि पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाउने प्रचण्डको निर्णय
जनताले अनुभूति गर्ने गरेर काम गर्न नेता कार्यकर्तालाई महामन्त्री खड्काको निर्देशन